Snapdragon cusub 870 oo loogu talagalay dhamaadka-qiimaha jaban: dhammaan astaamaheeda | Androidsis
Qualcomm waxay soo saartay Snapdragon 870 mobiil aad u qiimo jaban
Shirkadda Qualcomm ayaa hadda sameysay tallaabo aan la fileyn oo aan looga baran jiilalkii hore. Waana taas, in ka yar bil markii laga joogo Snapdragon 888, processor-kiisa ugu awooda badan dhamaadka sanadka 2021, wuxuu hada bilaabay nooc ka mid ah - hadaad dhihi karto - xoogaa yar, taas oo timaad Snapdragon 870 oo waxay noqon doontaa ta ay isticmaalaan mobilada-darajooyinka sare leh qiime hoos u yara dhici doona.
Su'aasha, Dhammaan taleefannada gacanta ee yimaada ee ku qalabaysan Snapdragon 870 way ka jaban yihiin kuwa Snapdragon 888, halka harsan-dhamaadka sare, sidaa darteed weli waxay bixin doonaan waxqabadka fasalka-top.
1 Noocyada iyo tilmaamaha farsamada ee Snapdragon 870
1.1 Mobilada ugu horeeya ee heysta wuxuu ka imaanayaa Motorola
Noocyada iyo tilmaamaha farsamada ee Snapdragon 870
Marka hore, waxaan wajahaynaa gabal aan lahayn cabbirka node 5 nm ee aan ka helno Snapdragon 888. Si loo fududeeyo qiimaheeda, soo saaraha semiconductor-ka ayaa siiyay 7nm Geedi socodka dhismaha FinFet, taas oo wali aad ufiican xaga tamarta tamarta, laakiin aan ufiicnayn mida 5 nm ah, oo u taagan horumar qaybtan ah.
Tan kale waa taas 5G isku xirnaanta waxaa lagu hayaa Snapdragon 870, sidee bay noqon kartaa si kale; halkan waxaan kula jaanqaadi karnaa shabakadaha caalamiga ah ee SA iyo NSA oo ay ugu mahadcelinayaan modemka X55 ee ay sidato, kaas oo la jaan qaadaya MIMO 4X4 isla markaana bixiya soo dejinta ugu badnaan iyo xawaare soo dejin ah oo gaadhaya 7.5GB / s iyo 3GB / s. Muuqaalkan waxaa sii dheer WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, Bluetooth aptX, iyo taageerida NFC. Juquraafi ahaan, waxaan haynaa GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC iyo SBAS.
Haddaba, haddaan u gudubno mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee barxadda cusub ee moobiillada, waxaa xusid mudan inay ka kooban tahay siddeed qaybood. Midka ugu weyni waa a Cortex-A77 waxayna ku shaqeysaa ugu badnaan saacad dhan 3.2 GHz. Saddex kale waa Cortex-A77 oo tagaya 2.4 GHz, halka afarta ugu dambeysa, oo diiradda saaraya shaqooyinka ka fudud, ay yihiin Cortex-A55 oo ku shaqeeya qiyaastii 1.8 GHz.
Qalabaynta sawirada - sidoo kale loo yaqaan kaliya GPU - waa Adreno 650, isla sidii aan uga helnay Snapdragon 865 sanadkii hore. Tani waxay damaanad qaadeysaa waxqabadka dheecaanka dhexdhexaadka ah ee dheecaanka leh, iyo sidoo kale mowduuca ka shaqeynta muuqaalka iyo wax kasta oo xiriir la leh multimedia, sida astaamaha sida OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1 iyo DirectX 12 ayaa lagu soo daray.
Ka dib mawduuca ciyaarta, mahadsanid xaqiiqda ah in Snapdragon 870 uu leeyahay Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, waxay taageertaa taranka cayaaraha HDR ee dhabta ah, oo leh qoto dheer 10-bit midab leh iyo midabka midabka 2020. Intaa waxaa dheer, dhammaan kontoroolayaasha GPU Iyaga waa la cusbooneysiin karaa, sidaa darteed waxay had iyo jeer u furnaan doonaan wax hagaajinta iyo hagaajinta waxqabadka, iyada oo aan loo baahnayn in la cusbooneysiiyo OS-ga mobile-ka sida oo kale.
Kaararka xusuusta, Chipset-ka processor wuxuu taageeraa kaararka LPDDR4X iyo LPDDR5 RAM, kuwa ugu horumarsan mobilada. Waxa kale oo ay taageertaa xawaaraha ugu badan ee saacadda oo ah 2750 MHz iyo awoodda ugu badan ee 16 GB oo RAM ah. Isla mar ahaantaana, waxay taageertaa nooca UFS 3.1 nooca xusuusta ROM.
Marka la eego amniga iyo asturnaanta iyo ikhtiyaarrada furitaanka, waxaa jira taageero akhriska faraha, aqoonsiga iris, aqoonsiga wajiga, iyo aqoonsiga codka. Dareenkan, moobilku wuxuu leeyahay Qualcomm Mobile Secutiry.
Marka la eego bandhigyada, Snapdragon 870 wuxuu la jaan qaadayaa kumbuyuutarrada leh xallinta 4K ee heerka cusbooneysiinta 60 Hz iyo QuadHD + (2K) ee 144 Hz, iyo sidoo kale HDR10 iyo HDR10 +, iyo qoto dheer oo 10-bit ah. Tikniyoolajiyadda degdegga ah ee lacag-bixinta, waxaa jira taageero loogu talagalay Lacag-bixin Degdeg ah 4+ oo aan ahayn Lacag-bixin Degdeg ah 5, oo ah nooca ugu dambeeyay ee tan oo laga heli karo Snapdragon 888.
Sawir qaadis ahaan, Chipset-ka processor-ku wuxuu ku shaqeyn karaa hal shidma ilaa 200 MP, dhaqdhaqaaq gaabis ah oo 720p ah 980 fps iyo duubista fiidiyaha 8K.
Mobilada ugu horeeya ee heysta wuxuu ka imaanayaa Motorola
Taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ee qalabeeya Snapdragon 870 weli lama xaqiijin, marka laga reebo Motorola Moto Edge S, oo noqon doonta kii ugu horreeyay ee sii daaya. Moobaylkan waxaa la bilaabi doonaa 26-ka Janaayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Qualcomm waxay soo saartay Snapdragon 870 mobiil aad u qiimo jaban
Iibsiga Google ee Fitbit waa la dhammeeyay